ယေရှုခရစ်တော်၌အခြေတည်သောယုံကြည်ခြင်း| Faith in Jesus Christ | Real Conversion
၂၀၁၁ခုနှစ်၊ဒီဇင်ဘာလ၁၁ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ သခင်ဘုရား နေ့ နံနက်ပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသောဒေသနာတော်၊
Lord’s Day Morning, December 11, 2011
“သို့သော်လည်းလူအပေါင်းတို့သည် ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကို နားထောင်ကြမဟုတ်။ ပရောဖက် ဟေရှာယစကားဟူမူကား၊ အိုထာ၀ရဘုရား၊ ကျွန်ုပ်တို့ဟောပြောသောသတင်းစ ကားကို အဘယ်သူယုံပါသနည်းဟုဆို၏။ သို့ဖြစ်၍ ယုံကြည်သည် ကြားနားခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်၏။ ကြားနားခြင်းသည်လည်း ဘုရားသခင်၏ စကားတော်အားဖြင့်ဖြစ်၏”။ (ရောမ ၁ဝး၁၆-၁၇)။
“ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်က ညိုးနွမ်းသွေ့ခြောက်စေသည်”ဟူသော တရားဒေသနာတော်ကိုမနေ့ က ဒေါက်တာချန်မှဟောကြားဝေငှခဲ့သည်။ ထိုတရားဒေသနာတော်ကိုးကားသော ကျမ်းချက်မှာ “ထာ၀ရဘုရား၏လေတိုက်သောအခါ၊ မြက်ပင်သည်ညိုးနွမ်းသွေ့ခြောက်လေ၏ အပွင့်သည်လည်း ကြွေတတ်၏။ အဘယ်စင်စစ်လူတို့သည် မြက်ပင်ဖြစ်ကြ၏”။(ဟေရှာ ၄ဝး၇)၌ ဖေါ်ပြချက်ပင်ဖြစ် သည်။ ဒေါက်တာချန်ဟောကြားခဲ့သည်မှာ၊
-ထိုအရာသည် သင့်စိတ်နှလုံးသားထဲ ဖြစ်ပျက်တွေ့ကြုံရမည်။ မှားယွင်းနေသော သင့်၏မျော်ကိုးရာ၊ သင့်ကိုသင်အားကိုးသောအရာများအားလုံးကို kရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်က သွေ့ခြောက်စေမည်ဖြစ်သည်။ သင်သည် ဇာတိသဘောအားဖြင့် လုံး၀ပျက်စီးယိုးယွင်းနေသော အဖြစ်၌လူသားဖြစ်၍ မိမိကိုယ်ကို နားမလည်နိုင်ပဲ စိတ်ရှုတ်ထွေးနေမည်၊ ဝေခွဲမရ ဖြစ်နေမည် ၊ရှက်ကိုးရှက်ကန်း၊ အရှက်မဲ့သောသူ ဖြစ်နေသူဟူ၍ မိမိကိုယ်ကို သိလာထိတိုင်အောင် ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်က ပန်းပွင့်နွမ်းရိသည့်ပမာ သင့်ကိုသင် ယုံကြည်အားကိုးနေသမျှအားလုံးကို သွေ့ ခြောက်စေမည်။ “မိမိကိုယ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်မုန်းမိသည်”။ ဆိုသောအမျိုး သမီးငယ်အသက်တာမပြောင်းလဲခင်က ကဲ့သို့ သင်သည်ခံစားရမည်။ ထိုအရာ သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် သွေ့ခြောက်စေခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိ
ကိုမိမိ မကျေနပ်ခြင်းသက်သက်မဟုတ်ပါ။ ပြင်းပြင်းထန်ထန် မိမိကိုမုန်းမိခြင်း သာဖြစ်သည်။ ထိုအရာသည်စစ်မှန်စွာ အသက်တာပြောင်းလဲသောသူတို့၌အမှန် ဖြစ်ပျက်နေပါလိမ့်မည်။ “စေ့စပ်သေချာစွာအပြစ်ကို နားလည်ခြင်း” မရှိဘဲလူသားတို့သည် ယေရှုသခင်ထံတိုးဝင်ချဉ်းကပ် လျှက်မရှိကြဘူးဟူ၍ အိုင်အိန်းအိပ်ခ်ျမူရေးကရေးသားသီကုံးခဲ့ပါသည်။ (Iain H. Murray, The Old Evangelicalism, The Banner of Truth Trust, 2005, p. 7) “ကျေးဇူးမေတ္တာ” ဓမ္မကလောင်ရှင် ကရေးသားခဲ့သည်မှာ
မေတ္တာတန်းခိုး ဘုန်းသရေ ကျွန်ပ်ခံစားရ
ဆိုးညစ်သော မာန်နတ်၏ သွေးဆောင်ခြင်းမှ
ထာ၀ရခံစားရာ ကောင်းကင်သို့ ဆောင်ယူ
(၁၇၂၅-၁၈၀၇ခုနှစ်၊ဂျွန်နယူတန် သီကုံးရေးသားသော “ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမားသော
သခင်”ကို “ကျွန်ုပ်ရှိသည်” ဟူသောဓမ္မသီချင်းသံစဉ်ဖြင့် သီဆိုသည်။
များမကြာခင်သင်တွေ့ကြုံရသော အပြစ်ဖော်ပြခြင်း၊ အပြစ်၏အခကိုခံခြင်း၊ သန့်ရှင်းခြင်းများ သည် သင်အား ကယ်တင်ရှင် ယေရှုခရစ်တော်ကို လိုအပ်ကြောင်းသက်သေခံပါလိမ့်မည်။
ခရစ်တော်သခင်၏ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့် အသွေးတော်အားဖြင့် သန့်ရှင်းခြင်း ကျေးဇူးဆီသို့ ပို့ဆောင်ပေးပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍သာသင်သည် ခရစ်တော်ထံသို့ တိုးဝင်ချည်းကပ်ခြင်းမရှိပါက၊ ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသသည် သင့်အပေါ်သို့ အစဉ်တည်နေမည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် အတူမပါရှိခြင်း ၊ခရစ်တော်အတူမပါရှိခြင်းဘ၀အသက်တာ၌ မျော်လင့်စရာမရှိခြင်းသည်အသက် ရှင်လျှက်သေနေခြင်း နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ စပါဂျန်ဟောကြားခဲ့သည်မှာ၊ ကျွန်ပ်ဝိညာဉ်က သင့်အားသနားမိတယ်-သင်ကော မိမိကိုမိမိမသနားဘူးလား? ပရိတ်သက်များ၊ယုံကြည်ခြင်းမရှိခြင်း၊ ကျေးဇူးတော်မဲ့ခြင်း၊ ခရစ်တော်မပါရှိခြင်း! ဟူသည် ခရစ်တော်အသေခံခြင်း၌ သင်ပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သခင်အသွေးတော်က သင့်အပြစ်အား ဆေးကြောသန့်ရှင်းစေပြီးဖြစ်သည် သင်သည် သင့်အပြစ်ဒုက္ခထဲပင်ရှိနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ အို! ဝမ်းနည်းစရာကောင်း လိုက်တဲ့ဝိညာဉ်! နှစ်သက်ဖွယ်မရှိတဲ့ ဝိညာဉ်! ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော် အပြစ်ဘက်၌ ရောက်ရှိနေပြီးသနားခြင်းမေတ္တာဟူ၍မရှိပြီ၊ ထာ၀ရရှင်သန်ရေးအ တွက်စားစရာ၊ သောက်စရာဘာဆိုဘာမှမရှိပါ။ အို! သေသေချာချာစဉ်းစားကြပါ အုံး၊ ယ္ခုလက်ရှိဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခနှင့်အဆုံးမသတ်သေးဘူး၊ င်သည်ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲသေသွားမယ်ဆိုရင်၊ ကြောက်လန့်စရာကောင်းသောခရစ်တော် ၏တရားစကားကိုနားထောင်ကြည့်ပါ။ “အကယ်သင်သည် ငါ့ကိုမယုံကြည်ပါက၊ သင်သည်သင့်အပြစ်၌ အသေခံရပါမည်။ ဘယ်သူကမှမသွားချင်သောနေရာ၌သင် ကိုစွန့်ပစ်မည် သင့်အပြစ်ကြောင့်ငရဲ၌ချုပ်နှောင်ခြင်းခံရပါမည်! အို! အဖဘုရား မီးငရဲထာ၀ရဖျက်စီးခြင်းမီးအိုင်ထဲသင်ပစ်ချခံရမည်၊ ထိုဆင်းရဲခြင်းကလွတ်မြောက် ဖို့ယေရှုသခင်ကို(အပြန်)လက္ခယုံကြည်လိုက်ပါ။ မကြာမိသတင်းကောင်းကြားရ တော့မည်မဟုတ်တော့ပြီ၊ တရားဒေသနာလည်းမရှိတော်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျေးဇူး တော်သည်လည်းမရှိတော့မည်မဟုတ်ပါ။ အို! (ငရဲမီးအိုင်ထဲတရားဒေသနာတော်ကို နာခံချင်လာမည်။ အဘယ်တရားဟောဆရာလည်းမရှိတော့ပြီ။ “နောင်တရလျှက် ပြန်လှည့်လာပါ ဘယ်ကြောင့်ငရဲ၌သေရမည်နည်း”! သင့်နားပတ်လည်အမှောင် ထုဝန်းရံလျှက်ရှိသည်။ထိုသူတို့အဖို့နုတ်ကပတ်တော်မိန့်တော်မူသည်ကား”ညစ်ညူး သောသူသည် ညစ်ညူးစေဦး”ဟူသတည်း။
အို! အဲဒီနေရာ(ငရဲ၌နာကျင်မှုဝေဒနာခံစား)၌ သင်သည်ကြီးစွာသောစိတ်ဆင်း ရဲခြင်းခံရစဉ်၊ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း င်ကြားနာခဲ့ဖူးသဖြင့်သင့်အသိစိတ်က သိနေမည်ဖြစ်၍ ထိုအခါကြီးစွာ သင်ငိုနေရမည်။ “ကျွန်တော်အဲဒီသတင်းကောင်း ကို ကြားဖူးခဲ့သော်လည်းငြင်းပယ်ခဲ့၏” (C .H. Spurgeon, “How Can I Obtain Faith?” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications,1984 reprint , volume 18, p.48).
“သို့သော်လည်း၊ လူအပေါင်းတို့သည် ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကို နားထောင်ကြ သည်မဟုတ်။ ပရောဖက်ဟေရှာယစကားဟူမူကား၊ အိုထာ၀ရဘုရား အကျွန်ပ်တို့ ဟောပြောသောစကားကို အဘယ်သူယုံပါသနည်းဟုဆို၏။ သို့ဖြစ်၍ ယုံကြည် ခြင်းသည် ကြားနာခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်၏။ ကြားနာခြင်းသည်လည်း ဘုရားသခင်၏ စကားတော်အားဖြင့်ဖြစ်၏ (ရောမ ၁ဝး၁၆-၁၇)။
ယေရှုခရစ်တော်ကို မိမိကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အပြစ်နှင့် ငရဲမှလွတ်မြောက်ရန်တခု တည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုခရစ်တော်၌ ယုံကြည်ခြင်းမည်ကဲ့သို့ ခိုင်မာမည်နည်း? ရိုးရှင်းသောအဖြေရှာမှာ- ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်၏၊ ကြားနားခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏စကား တော်အားဖြင့်ဖြစ်၏”၊
၁။ ပထမ၊ ယုံကြည်ခြင်းဟူသည် ယေရှု၌အခြေတည်ရမည်။
ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်း၌ဆန်းဆန်းပြားပြား ဖော်ပြသောအချက်တစ်ခုရှိပါသည်။ ကျွန်ုတော် သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်မတိုင်မှီက မကြားဖူးခဲ့ပါ။ တရားဟောဆရာများဟောပြောခဲ့သည် မှာ “ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ယေရှုထံတိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပါ”။ ထိုသို့သော အချက်သည်ယခုအချိန်တွင် ပြောင်းလဲသွားပြီးဖြစ်၍ ခါတိုင်းလိုမဟုတ်သောစကားစုမှာ “ယေရှု၌ယုံကြည်၍တိုးဝင်ပါ” ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအချက်သည် ကျွန်ုပ်အတွက်ကြောက်စိတ်ဝင်စေပြီး ရှုတ်ထွေးစေခဲ့သည်။ အပြစ်သားများသည် ယခုအချိန်တွင် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်တိုးဝင်ပါဟုသာပြောခဲ့ကြသည်။ မည်ကဲ့သို့ “ယုံကြည်ခြင်းနှင့်တိုး ဝင်မည်နည်း? မဟုတ်သေးဘူး! မဟုတ်သေးဘူး! “ယုံကြည်ခြင်းနှင့် တိုးဝင်ပါ” ဟူသောအချက်သည် သင့်ကိုကူညီပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထိုအချက်များသည် “စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ဝါဒ”မှထွက်ပေါ်လာ၍ ခက်ခဲရှုတ်ထွေးစေပါသည်။ ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်သာ ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ရမည်။ ယုံကြည်ချက်ဟူသောအရာက အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ပါ။ သမ္မာကျမ်းစာက-”နတ်ဆိုးတို့သည် ယုံ၍ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြ၏” (ယာကုပ် ၂း၁၉)။ နတ်ဆိုးတို့သည် အသိပညာကြွယ်၀ကြသည်။ နတ်ဆိုးတို့က ယေရှုကမည်သူ ဖြစ်သည်ကို သိခဲ့ကြသည်။ “ဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှု၊ ကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်တို့နှင့် အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်း။ အချိန်မရောက်မှီ အကျွန်ုပ်တို့ညှည်းဆဲခြင်းငှါကြွလာတော်မူသလောဟု အော်ဟစ်၍လျှောက်ကြ၏” (မဿဲ ၈း၂၉)။ နတ်ဆိုးတို့သည် ကျမ်းတက်ပုဂ္ဂိုလ်များထက် ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားကြသည်။ အတွေးအခေါ်ဦးနောက်ဖြင့်သာလျှင်ဖြစ်၍ ငြင်းပယ်သောသူများဖြစ် ပါသည်။ နတ်ဆိုးတို့သည် ယေရှုကိုဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကို “ယုံကြည်” ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်လည်းနတ်ဆိုးတို့သည် ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကို ယုံကြည်ခြင်းမရှိခဲ့ကြပါ။ မဟုတ်ပါ! မဟုတ်ပါ! “ယုံကြည်ခြင်း၌တိုးဝင်ပါ” ဟူသောအချက်သင်ကို ကယ်တင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ယေရှု၌ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ရမည်။ (သို့)နတ်ဆိုးများနှင့်စာတန်အပေါင်းအဖော်များနဲ့အတူ မီးတောက် လောင်ငရဲမီးအိုင်ထဲမှသင်လွတ်မြောက်လိမ့်မည်။ ဦးနှောက်အားဖြင့် ယုံကြည်သောလူတိုင်းသည် ကယ်တင်ခြင်းရမည်မဟုတ်ပါ။ ယေရှုခရစ်တော်၌ ယုံကြည်ခြင်းမျိုးရှိရမည်။ ယေရှုကိုလက်ခံ၍ ယုံကြည်ခြင်းမျိုးပင် ဖြစ်သည်။ ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းသည် ယေရှုကိုတိုးဝင်ချဉ်းကပ်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းသည် ယေရှုရှာဖွေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းသည် ယေရှုကိုကိုးစားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ဒီမနက်ခင်း၌ပြောပြလိုသည်မှာ-”ယေရှု၌ယုံကြည်ခြင်းရှိပါ” ယေရှုကိုယုံကြည်ပါ!ယေရှုကိုကိုးစားပါ။ ယေရှုကိုရှာဖွေပါ။ ယေရှုကိုတိုးဝင်ပါ။ ဂျိုးဇက်ဟက်တ် (၁၇၁၂-၁၇၆၈)၌ ပြောခဲ့သည်မှာ-”ယေရှုခရစ်တော်မပါမရှိပဲ၊ ယေရှုခရစ်တော်မရှိပါက၊ အပြစ်သားများကိုစာနာကယ် တင်သူမရှိ၊ ယေရှုခရစ်တော်မပါမရှိဘဲ၊ ယေရှုခရစ်တော်မရှိပါက၊ အပြစ်သားများကိုစာနာကယ်တင် သူမရှိ!”
“သို့ဖြစ်၍ ယုံကြည်ခြင်းသည်ကြားနားခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်၏ ကြားနာခြင်းသည်လည်း ဘုရားသခင်၏စကားတော်အားဖြင့်ဖြစ်၏” (ရောမ ၁ဝး၁၇)။
၂။ ဒုတိယ၊ ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းနည်းလမ်းများသည် အလိုအလျှောက်ရောက်မလာပါ။
ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းသည် ခရစ်ယာန်မိသားစုမှ ဖွားမြင်ခြင်းဖြင့် ရောက်လာခြင်းမဟုတ်ပါ။ ရှေးစကားပုံကျွန်တော်ကြားဖူးခဲ့သည်မှာ “ဘုရားသခင်၌ မြေးများမရှိ”ဟူပင်ဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် မှန်ကန်သော စကားပုံဖြစ်သည်။ အကယ်၍သင်သည် အသင်းတော်၌အသင်းသားအသစ်ဖြစ်ပါက ခရစ်ယာန်မိသားစုမှ ကလေးသူငယ်များသည်ကယ်တင်ခြင်းရရှိပြီးသူများဟုသင်မယူဆပါနှင့်။ တစ်ချို့မှာမပြောင်းလဲသူများလည်းရှိပါသည်။ သင်ထင်မြင်ယူဆနိုင်သည် “သူတို့သည်ခရစ်ယာန်မိ သားစုဖြစ်၍ တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကြားရသဖြင့် ခရစ်ယာန်များမဟုတ်ကြဘူး လား? သမ္မာကျမ်းစာက ထိုသူတို့သည် “အစဉ်သင်သော်လည်း၊ သမ္မာတရားကို လေ့ကျက်ခြင်းသို့အလျှင်း မရောက်နိုင်” (၂တိ ၃း၇) ထိုသူတို့သည်ဘုရားကျောင်းသို့ရောက်ကြ သည်မှာ ထိုသူတို့၏မိဘများမှခေါ်ဆောင်လာရခြင်းဖြင့်သာဖြစ်၍(သို့)ထိုသူတို့သည်အလေ့အကျင့် များအားဖြင့်ဘုရားကျောင်းသို့ ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်းထိုသူတို့သည် အပြစ်ဒုစ ရိုက်၏ဖိနှိပ်မှုအောက်တွင်မရောက်ရှိကြပါ။ ထိုမျှမက ထိုသူတို့သည်ယေရှုကိုတို့ဝင်ချဉ်းကပ်ခြင်း မရှိကြပါ။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ယေရှုခရစ်တော်၌ တလုံးတစ်၀တည်းမရှိကြပါ။ ထိုသူတို့သည်ခရစ် ယာန်များလည်းမဟုတ်ကြပါ။
နောက်ပြီးယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းသည် သင်ကယ်တင်ခြင်းခံရန် ယေရှုကိုတောင်းဆိုရုံမျှဖြင့် ရောက်လာခြင်းမဟုတ်ပါ။ သင်သည်ယေရှု၏အဝေးတစ်နေရာမှသင်၏ကယ် တင်ခြင်းအတွက် တောင်းဆိုကာနေ၍သင်သည် ယေရှုကိုမတိုးဝင်သေးပါက၊ ယေရှုကိုမကိုးစားပါကယေရှုနှင့်မပေါင်း မပေါင်းစည်းပါက အဝေးရောက်နေမည်ဖြစ်သည်။ အသေအချာပင်! သင်သည်ယေရှုထံသို့ တိုးဝင်၍ခိုလုံပါက သင်၏အပြစ်ခွင့်လွှတ်ရန်တောင်းဆိုခြင်းသည် သင်၏လုပ်ဆောင်ချက်မပါပြည်စုံ လာမည်။ “သင်တို့သည် အသက်ကိုရအောင်ငါ့ထံသို့လာခြင်းငှါ အလိုမရှိကြ” (ယောဟန် ၅း၄၀)။
တဖန်ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းသည် စိတ်ဆန္ဒ၏လုပ်ဆောင်ချက်အားဖြင့်ရောက်လာခြင်းမဟုတ်။ တချို့သူတို့မှာ စိတ်ခံစားချက်များစွာပြည့်နက်၍ သူတို့၌ပြည့်စုံခွင့်မရှိပါ။ စိတ်ခံစားမှုများသည်ရာ သီဥတုကဲ့သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ ဒီနေ့ပူပြင်း၍မနက်ဖြန်သောနေ့တွင် အေးမြနေမည်။စိတ်ခံစားမှု နှင့်စိတ်နေသဘောထား ခံစားပုံတို့သည် ရာသီဥတုကဲ့သို့အပြောင်းအလဲရှိသည်။ အက်ဝါးမုတ်ပြော ခဲ့သည်မှာ “ချိုမြိန်သောစိတ်ခံစားမှုကို ကျွန်ုပ်မယုံရဲ့ပါ။ သို့သော် ယေရှု၏နာမတော်ဖြင့်အရာအား လုံးတည်ရှိသည်” “စိတ်နေသဘောထား”အားဖြင့်အက်ဝါးမုတ်ဆိုလိုသည်မှာ “ခံစားချက်”ဖြစ်သည်။
အချိုမြိန်ဆုံးသော စိတ်ခံစားချက်များကိုမယုံရဲ့ပါ။ အကျွန်ုပ်၏မျှော်လင့်ခြင်းသည် မည်သည့်အရာ ပေါ်တွင်မတည်ဆောက်၍ ယေရှု၏”အသွေးတော်”နှင့် “ဖြောင့်မတ်ခြင်း”၌ပင်ဖြစ်သည်။ သီဆိုပါ။
( ၁၇၉၇-၁၈၇၄ ခုနှစ် အက်ဝါးမုတ်သီကုံးသော “ကျောက်မြဲကျုး”)။
နောက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းသည် စိတ်ကူးပုံဖော်ပြခြင်းအားဖြင့် ရောက်လာခြင်းမဟုတ်ပါ။ “စိတ်ကူးပုံဖော်ခြင်း”ဟူ၍၊ကျွန်ုပ်ဆိုလိုသည်မှာ ယေရှုကိုပုံဖော်ပြီးတိုးဝင်ခြင်းနှင့် သင်၏နှလုံးသားထဲ ၌ယေရှု၏ပုံရိပ်ထဲသို့တိုးဝင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချက်သည်အချည်းနှီးသောကိုယ်စားရုပ်တုဖြစ်သည်။ ယေရှုကိုသင်၏စိတ်နှလုံးသားထဲ၌ ပုံစံတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးတိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပါ။ သို့သော်ထိုအရာသည် ယေရှုကိုယ်တိုင်မဟုတ်ပါ။ စပါဂျန်ပြောခဲ့သည်မှာ”စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းတွင် စိတ်၏ခဏတာ စေရာထက် ကျောက်ဆောင်၏အုတ်မြစ် အခြေခံတည်ဆောက်မှုကဲ့သို့သော ခိုင်မာမှုပို၍ကြီးမားကာ ရှိသည်”။ (ibid, p. 40).
နောက်ထပ်ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းသည် သင်၏ရင့်ကျက်သော အသက်တာအတွေ့အကြုံ”သွေ့ ခြောက်ညိုးနွမ်းခြင်း” အားဖြင့်ရောက်လာခြင်းမဟုတ်ပါ။ တချို့သောသူတို့မှာအပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမှ လွှတ်ရန်ရုပ်တုများပြုလုပ်ကြသည်။ သူတို့အထင်မှာအပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမှ သူတို့အားကယ်တင် လိမ့်မည်ဟု ထင်မြင်ယူဆကြပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ သူတို့မှာအပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမှလွှတ်မြှောက်ရန် ရုပ်တုများပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ လူသားထဲ၌ရှိသော အပြစ်ဟူသမျှသည်ယေရှုကိုယ်တိုင်၏ အဝေး၌ သာတည်ရှိနေသည်။ “မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံ၍၊ လူတို့တွင်အယုတ်ဆုံးသောသူဖြစ်၏ငြိုငြင်သောသူ နာကြဉ်းခြင်းဝေဒနာနှင့် ကျွမ်းဝင်သောသူဖြစ်၏ သူတပါးမျက်နှာလွဲခြင်းကိုခံရသောသူကဲ့သို့ဖြစ်၏ မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံလျှက်ရှိ၍၊ ငါတို့သည်မရိုသေကြ”(ဟေရှာယ ၅၃း၃)။ အိုး! မိတ်ဆွေယုံကြည် ခြင်းဖြင့် ယေရှုကိုယ်တိုင်အားတိုးဝင်၍ နီးကပ်ရန်ကျွန်ုပ်မေတ္တာထပ်ခါရပ်ခံပါသည်။ ယေရှု၏မျက် နှာတော်မှမပုန်းပါနှင့်။ ယေရှုကိုတိုးဝင်ပါ။ ယေရှုကိုယုံကြည်ပါ။ ယေရှုကိုကိုးစားပါ။ ယေရှုကသင့် ကိုကယ်တင်လိမ့်မည်။ ယခုသင့်ကိုကယ်တင်လိမ့်မည်။
၃။ တတိယ၊ ယုံကြည်ခြင်း၏စစ်မှန်သောလမ်းသည် ယေရှုပင်ဖြစ်သည်။
“ယုံကြည်ခြင်းသည် ကြားနာခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ကားနာခြင်းသည်လည်း ဘုရားသခင်၏ စကားတော်အားဖြင့်ဖြစ်၏” (ရောမ ၁ဝး၁၇)
ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းတရားဒေသနာတော်များကိုကြားနာပါ။ အလွန်လေးနက်စွာနားထောင်ပါ။ သင်ကြားနာခဲ့သောတရားဟောချက်ကို လေးနက်စွာသတိရပါ။ အပတ်တကုတ်ကြိုးစား၍ လေးနက် စွာသတင်းကောင်းကို နာခံလိုက်လျှောက်ပါ။ ယေရှုထံပါးသို့တိုးဝင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အား ကျမ်းပိုဒ်ငယ်၌ဖော်ပြခဲ့သည်မှာ-
“လူအပေါင်းတို့သည် ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကို နားထောင်ကြသည်မဟုတ်” (ရောမ ၁ဝး၁၆)။
“သတင်းကောင်းကို နားထောင်ပါ”ဟူသော ဆိုလိုရင်းကဘာကိုဖော်ပြသနည်း? ဘာကြောင့်လဲ? ဆိုလိုရင်းမှာ ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းရှိပါ။ ယေရှုထံပါးသို့တိုးဝင် ပါ။ လက်ရှိသတင်းကောင်းကို နားထောင်ပါ။ ယေရှုကိုယ်တိုင်ထံသို့တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပါ။ ယေရှု သည်သင်၌ အသက်ကိုပေး၍ သင်၏အပြစ်ကိုသန့်ရှင်းစေမည်။ အာမင်! မိတ်ဆွေ၏သီချင်းစာရွတ် နံပါတ်(၁၉)ကို ကျေးဇူးပြု၍လှန်ပြပါ။ မတ်တပ်ရပ်ပြီးသီဆိုရအောင်-
(၁၇၈၉-၁၈၇၁ ခုနှစ်ချာလော့တ်အီလီယော့တ်သီကုံးသော “ရှိသည်အတိုင်း”)
ဒေသနာတော်မတိုင်ခင်ဒေါက်တာခရိတ်တန်အာယ်ချာလ်မှ ရောမ ၁ဝး၉-၁၇ကိုဖတ်ကြားပေးသည်။
ရေးသားသော”ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမားသောသခင်”ဟူသောဓမ္မသီချင်းကို “ကျွန်ုပ်ရှိသည်အတိုင်း”ဟူသော သံစဉ်ဖြင့်သီဆိုပေးသည်။
ရှင်ယာကုပ် ၂း၁၉၊ မဿဲ ၈း၂၉၊ ရောမ ၁ဝး၁၇။
၂တိ ၃း၇၊ ယောဟန် ၅း၄၀၊ ဟေရှာယ ၅၃း၃၊